Porn နှင့် Snickers တို့၏တူညီသောအရာကဘာလဲ။ Sherry Pagoto, Ph.D ဘွဲ့ကို, ဆေးပညာ၏တွဲဖက်ပါမောက္ခ - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်တွင် Porn
Porn နှင့် Snickers ဘုံတှငျအဘယျဖူးသလား? ဖြစ်သူရှယ်ရီ Pagoto, Ph.D ဘွဲ့ကို, ဆေးပညာ၏တွဲဘက်ပါမောက္ခအားဖြင့်
ကျွန်တော်ပျော်မွေ့ junkies လူမျိုးဖြစ်လာပါသလား?
ဖြစ်သူရှယ်ရီ Pagoto, Ph.D ဘွဲ့ကိုအားဖြင့်သြဂုတ်လ 7, 2012 ကျုံ့အတွက်
အစားအစာကျွန်တော်တို့ရဲ့စားသုံးမှုအတွက်ရှိမရှိလူတမျိုးအဖြစ်ကျနော်တို့ ပို. ပို. အလိုလိုကျလှနျးခွငျးဖြစ်လာကြပြီ, လိင်, အရက်သို့မဟုတ် မူးယစ်ဆေးဝါးများ။ ပစ္စုပ္ပန်မှာ 1 လူကြီးများအတွက်31 လူကြီးများအတွက်အဝလွန်နှင့် 10 များမှာတစ်ဦးဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း (အရက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေး) ရောဂါရှိပါတယ်။ ကြောင်း junk အစားအစာ, အရက်, ဆေးလိပ်ဖော်ပြခြင်းမနှင့် porn တစ်ဦးချင်းစီ Multi-ဒေါ်လာဘီလီယံစက်မှုလုပ်ငန်းများဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားကျည်ဆံတွေ Dodge ရန်ခက်ခဲကြသည်။
ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်အားလုံး junkies ဖြစ်လာလဲ? သုံးအချက်အကြှနျုပျတို့ကိုစုဆုံနေကြသည်။ ပထမဦးစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်သဘာဝကျကျပျြောမှေ့စအတွေ့အကြုံများကိုထွက်ရှာကျွန်တော်တို့ကိုမောင်းထုတ်။ အဘယ်သူမျှမပြုလုပ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ရှိပါသည်။ ဒုတိယအချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်ဖိစီးမှု အဆင့်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းနေခြင်းအရာ, အစဉ်အဆက်ထက်ပိုမိုမြင့်မားများမှာ မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့, တတိယ ပတ်ဝန်းကျင် ပျြောမှေ့စရွေးချယ်စရာတစ်ခုတိုးပွားလာအမျိုးမျိုးနှင့်ရရှိနိုင်မှုတင်ပြနေပါတယ်။ ဒါဟာမကြုံစဖူးအဆင့်ဆင့်မှအပျြောအပါး-ရှာကြံအပြုအမူကားမောင်းဖြစ်ကြောင်းတပ်ဖွဲ့များတစ်ဦးသေစေလောက်ပေါင်းစပ်ကိုယ်စားပြုတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုများကအားနည်း Prime ဦးနှောက်နှင့်အတူကျနော်တို့ချက်ချင်းဆန္ဒပြည့်တဲ့ပင်လယ်၌အရှုံးမပေး။
ကံဆိုးသောအကျိုးဆက်မှာ“ အလွန်အမင်း” ပျော်မွေ့ခြင်းကိုအလွန်အကျွံသောက်ခြင်းကကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်ကိုပြောင်းလဲစေသောကြောင့်ဒုံးကျည်မဟုတ်သောဘဝကဏ္aspectsများကိုပျော်မွေ့စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအင်ဆန္ဒများသည် ပို၍ တိုး။ မရောင့်ရဲနိုင်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ များသည်မပျော်မရွှင်ဖြစ်လာသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းသူကိုကြည့်ကြစို့။ အလွန်ပြင်းထန်သောလိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုပုံစံများကိုမကြာခဏရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်၊ ညစ်ညမ်းသောစွဲစွဲသူသည်ပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမှလိင်အပျော်အပါးကိုမခံစားနိုင်အောင်ဖွံ့ဖြိုးလာလိမ့်မည်။ ပြီးတော့အလေ့အထကရှည်လျားသွားရင်ညစ်ညမ်း မှလွဲ၍ မည်သည့်အရာမှမပျော်နိုင်ပါ။ ဤအပြုအမူပုံစံသည် ဦး နှောက်၏အခြေခံအားပြောင်းလဲစေပြီး၎င်းတို့ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ သင်တွေးကြည့်နိုင်သည့်အတိုင်းလေးနက်သောပြproblemsနာများပေါ်ပေါက်လာသည်။ ပထမ ဦး စွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများ, ထို့နောက်ဆက်ဆံရေးပြproblemsနာများ, ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပြproblemsနာများ။ စွဲလမ်းသူအများစုကဲ့သို့ပင်ပြင်းထန်သောအကျိုးဆက်များ (ဆိုလိုသည်မှာ“ ကျောက်အောက်ခြေ” အတွေ့အကြုံ) သည်သူတို့၏အပြုအမူအားအမြဲတမ်းရပ်တန့်ရန်မကြာခဏလိုအပ်သည်။ ထို့နောက်၎င်းသည်ဖြစ်ပေါ်လာသောလှုံ့ဆော်မှုများကိုတသမတ်တည်းရှောင်ရှားရန်အချိန်များစွာလိုအပ်သည်။ ဦးနှောက် ပုံမှန်ပြန်သွားပါ။ အပြုအမူ၏တောင်မှသေးငယ်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲအတွက်ပွနျလညျရှငျနိုင်ပါတယ် စှဲမွဲမှု, abstinence ပုံမှန်အားဖြည့်ညှင်းထက်ပိုမိုထိရောက်သောသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သည့်
၎င်းသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောကိစ္စဟုသင်ထင်ကောင်းထင်ပေမည်။ သို့သော်အစားအစာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်“ ညစ်ညမ်းသော” စွဲလမ်းနေသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာသည်။ Junk food သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အစားအစာများ၏ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်သည်။ ဆား၊ အဆီနှင့်သကြားဓာတ်မြင့်မားသောအစာထုတ်လုပ်မှုသည်ကျေနပ်ဖွယ်ရာအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်၏အခြေခံကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးသည်။ တစ် ဦး စားသုံးသူတစ် ဦး အစားအသောက်များတွင် ပီဇာ၊ Snickers ဘားများနှင့်ပြင်သစ်ကြော်များတွင်အသီးများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အစေ့အဆန်များကဲ့သို့သောသဘာဝအစားအစာများကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ သူတို့၏အစားအစာများ၏ရှုခင်းသည်အပျော်အပါးမြင့်မားသောအစားအစာများနှင့်သဘာဝအစားအစာများကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။ ပို၍ ဆိုးသည်မှာအလွန်စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောအစားအစာကိုစိတ်ဖိစီးမှုများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်အားကိုးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခိုမှုတည်ဆောက်ရန်အန္တာရာယ်ရှိသည့်အပြင်ဘ ၀ တွင်မည်သည့်အရာကမျှသင်၏ချောကလက်ကိတ်မုန့်ထဲသို့သွားများကဲ့သို့နစ်မြုပ်နေခြင်းကိုမခံစားရပါ။ အမှန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလွတ်မြောက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပုံရတဲ့ပျော်စရာကောင်းတဲ့ထောင့်လေးတစ်ခုထဲကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုခြယ်မိလိုက်တယ်။ လူတိုင်းမှာသူတို့ရွေးချယ်နိုင်တဲ့အကျင့်ဆိုးတွေရှိတယ်။ မတူကွဲပြားမှုကအခြားတစ်နည်းအားဖြင့်အခြားသူတွေကိုအနိုင်ကျင့်တာနဲ့တူတယ်။ အလွန်အကျွံသောက်သူသည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းသူကိုကြည့်ပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးသောက်သူသည်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောအရက်ကိုစားသည်။ အမှန်တရားကတော့မကောင်းတဲ့အကျင့်ကမကောင်းဘူး။ အပြုအမူပုံစံသည်အရေးကြီးသည်။ အပျော်အပါးရှာခြင်းသည်အပျော်ဖြစ်သည်။ စိုစွတ်သောစောင်ကဲ့သို့မြည်သလော။ ညစ်ညမ်းမှုဆန့်ကျင်ရေး၊ ဤလုပ်ဆောင်မှုအားလုံးသည်မကောင်းပါ၊ ကြားဆက်ဆံရေး အရာအားလုံးမကောင်းတဲ့သွားဘဝကရယူထားသောအတူ။ သူတို့ဖြစ်လာတဲ့အခါ လိုအပ်သော“ သာမန်ဘဝဘဝအတွေ့အကြုံများထက် ပိုမို၍ အရေးကြီးသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့ကိုစိတ်ဖိစီးမှုများကဲ့သို့အလုပ်များသည့်အခါ“ သွားပါ” စီမံခန့်ခွဲမှု, ပျင်းစီမံခန့်ခွဲမှု, သို့မဟုတ်ရှောင်ရှားခြင်းလက်ထောက်-အရာကော်လံကလွဲနေတယ်သှားသောအခါဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်းထောင့်ပတ်လည်မှာတစ်ခုခုပျော်မွေ့ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေချိန်တွင်ကျနော်တို့အသက်တာ၌အေးဆေးတည်ငြိမ်နှင့်မှန်သောချိန်ခွင်ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲကျွန်တော်တို့ကိုအပိုင်စီး? ဤတွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့6မဟာဗျူဟာများဖြစ်ကြသည်။မင်းရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကဘာလဲ - သင်၏ပျော်ရွှင်မှုစနစ်ကိုမည်သည့်နေရာတွင်ဖြတ်သန်းသည်ကိုသိရှိပါ။ လူတိုင်းကွဲပြားသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်အားနည်းချက်ရှိသည်။ အချို့လူများသည်အစဉ်မပြတ်အသက်မရှင်နိုင်ကြပါ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း သို့မဟုတ်အရက်သောက်ပေမယ့်ကြော်အစားအစာ၏မျက်မှောက်မှာပြိုလဲသွားပြီ။ ဒါကြောင့်အောင်မြင်တဲ့ဒု ditchers မကြာခဏသတိလစ်နေတဲ့အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကဒုကူးပြောင်းသောသူအပေါင်းတို့သည်များလွန်းဘုံကြောင်းကိုသော်လည်းစိတ်ကိုထားပါ။ ဟောင်းဆေးလိပ်သောက်တန်ချိန် overeaters ဖြစ်လာနှင့်အစာအိမ်ရှောင်ကွင်းလူနာစာရေးသူတို့၏အလေးချိန်ကိုချွတ်သည် လာ. လောင်းကစားဝိုင်းသို့မဟုတ်အရက်ရှည်လျားပြီးနောက်တက်ယူပါ။ သင့်ရဲ့လက် tugging စေခြင်းငှါတပ်ဖွဲ့များအပေါ်တစ်ဦးအနီးကပ်မျက်စိထားပါ။ ပိုပြီးနောက်ကျအစဉ်အဆက်ထက်လောင်းကစားရုံမှရောက်ဖူးလား ရပ်။ ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခသည်းခံစိတ် - ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခသည်းခံစိတ်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ရပ်များမှတဆင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလက်ခံရဖို့သင့်ရဲ့စွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါသူတို့ထံမှအာရုံမဆိုလိုပါဘူး, ဒါပေမယ့်တကယ်, အထိခိုက်ယူကခံစားရကြောင်းနှင့်အတူကိုင်တွယ်နိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ ကျော်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်ရဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာလို့ကျော်နဲ့တူပျော်မွေ့-ရှာကြံအပြုအမူတွေမှကြွလာသောအခါအနိမ့်ဒုက္ခဆင်းရဲသည်းခံစိတ်ဆင်းရဲသားကို Self-ထိန်းချုပ်မှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။ ပိုငျသညျစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အပျော်အပါးရှာပိုမိုကြောင်းပုံစံအားဖြည့်သည်ကို ထောက်. အခြားတစ်ဖက်တွင်, Self-ထိန်းချုပ်မှုဆင်းရဲသားကိုလျှော့ချဒုက္ခဆင်းရဲသည်းခံစိတ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးမှာတော့သင်သောက်သို့မဟုတ်တစ်မူးရူးခြင်းမရှိဘဲဒုက္ခဆင်းရဲမကိုင်တွယ်နိုင်သည်ကိုယုံကြည်ဖို့လာကြလိမ့်မည်။ အလေ့အကျင့်ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အပြုအမူတွေကိုမြားတှငျပါဝငျခွငျးမရှိဘဲဒုက္ခဆင်းရဲကြုံတွေ့နေရ။ ဒီခက်ခဲသည်ဆိုပါကသင်၏အသက်တာအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်သစ်ကိုကျန်းမာနည်းလမ်းတွေသင်ယူဖို့အကူအညီကိုရှာရန်အရေးကြီးပါသည်ဖြစ်နိုင်သည်။
Control Availability - မည်သည့်နေ့ရက်မဆိုကျွန်ုပ်တို့သည်ပြတင်းပေါက်တစ်ခုသို့တက်။ ဘေကွန်ရေခဲမုန့်ဆိုင်လေးများ၊ pancakes နှင့်ပြုလုပ်ထားသောကြက်ဥအသားကပ်ပုံသို့မဟုတ်သကြားမှုန့်ဖြင့်သွန်းထားသော Fried Snickers တို့ကိုမှာယူနိုင်သည်။ သေချာတာပေါ့၊ ငါတို့မှာလည်းညစ်ညမ်းတဲ့ကမ္ဘာကြီးမှာအပြိုင်အဆိုင်ဥပမာတွေရှိတယ်၊ မင်းရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုရွေးပါ။ ငါဒီမျဉ်းကြောင်းကိုအရင်သုံးခဲ့ဖူးတယ်၊ ငါတို့အားလုံးဟာသဲကန္တာရကျွန်းမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အပြစ်တွေပဲ။ သင်၏ချုပ်တည်းမှုအားခြိမ်းခြောက်မှုခံရသည်ဟုသင်မခံစားရသည့်ကိုယ်ပိုင်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဖန်တီးပါ။ ဤအရာကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်သင်ရရှိနိုင်သောအရာကိုမထိန်းချုပ်လျှင်၊ သင်ရရှိနိုင်သောအရာကသင့်ကိုထိန်းချုပ်လိမ့်မည်။ အမျိုးမျိုး ... ဒုက္ခ၏အမွှေးအကြိုင်ဖြစ်ပါတယ် - အပေါ်လေ့လာရေး အလိုဆန္ဒ ကြောင်းအမျိုးမျိုးပြင်းပြင်းထန်ထန် overconsumption နှင့်ဆက်စပ်သည်ကိုပြသ။ သငျသညျလိမ့်မည်ထက် meatloaf စားပွဲပေါ်တွင်တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်ပါသည်အခါသင်တစ်ဘူဖေးမှာပိုပြီးစားလိမ့်မည်။ မမြင်ကွင်း၌သင်တို့ကိုဆာလောင်မွတ်သိပ်ချန်ထားမည်မဟုတ်တဦးတည်း၌သင်တို့ကိုမကျေနပ်သည့်စွန့်ခွာမည်ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့်အသက်တာ၏ဘူဖေးရှောင်ကြဉ်ပါ။ အိမ်မှာတဦးတည်းမဖန်တီးပါနှင့်အိမ်ပြင်ပတွင်သူတို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုကြပါဘူး။
သင့်ရဲ့တည်ငြိမ်သော Find - သတိ သေချာစွာစဉ်းစားခြင်း, လေ့ကျင့်ခန်း, ဇာထိုး, သင်၏အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖတ်နေ, ကြီးစွာသောအိမ်ပြင် ... ဘာမှဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင်တို့အဘို့အလုပ်လုပ်သောသူများကိုရှာဖွေငြိမ်သက်သဘာဝအရင်းမြစ်များအမျိုးမျိုးနှင့်အတူစမ်းသပ်ချက်။ သင့်ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲမှာကျန်းမာငြိမ်သက်မဟာဗျူဟာ၏ကျယ်ပြန့်လက်နက်တိုက်ရှိခြင်းဖြင့်, သင်သည်ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့သူတွေကိုအားဖြင့်ကျွန်ဖြစ်လာရှောင်ကြဉ်ပါ။ သငျသညျအခြို့သောအစွမ်းထက်ပေမယ့်ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ "သာယာတဲ့" ၏ကရုဏာတော်မှာဖြစ်ပါတယ်လျှင်သဘာဝကအေးဆေးတည်ငြိမ်အလုံအလောက်နဲ့တူခံစားရရန်အဘို့အခြို့သောအချိန်ကြာမည်။ အခုတော့လိုပဲဘယ်သူမျှမကအချိန်- ကျွန်ုပ်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာဆေးလိပ်သောက်ခြင်းရပ်တန့်ရေးအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ယခုတွင်ငါသည်ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့အဆင်သင့်မရင့်, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါလအနည်းငယ်အတွင်းပြန်လာပါလိမ့်မယ်။ "ဒီပိုရှည်သင့်ရဲ့ဒု, သငျသိမျးအတွက်တင်းကျပ်တဲ့က၎င်း၏ချုပ်ကိုင်ထားရရှိထားပါသည်။ ယနေ့ဖွစျလိမျ့မညျကြောင့်ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူလိမ့်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။